ကြောက်မက်ဖွယ် အချက်အလက်များကိုတွေ့နိုင်တဲ့ ဂျပန် - JAPO Japanese News
သော 20 Dec 2019, 10:46 မနက်
အမျိုးမျိုးသော ထူးခြားမှုတွေရှိတဲ့ ဂျပန်ပြည်….
အခြားတိုင်းပြည်တွေထက် ကွာခြားမှုတွေအများကြီးရှိတယ်လို့ သိကြပေမယ့် ဘယ်လောက်လောက် ကွာခြားလဲဆိုတာ ကိန်းဂဏန်းအားဖြင့်တွက်ချက်ရရင် လက်ရှိဂျပန်က ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
၁။ ဆိုးရွားသော ပင်စင်လစာ၊
အလုပ်မှအနားယူပြီးနောက် နေထိုင်စရိတ်ဆိုပြီးပေးတဲ့ငွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာတော့ ဂျပန်ကကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ပင်စင်လစာက အလွန်ပင်နည်းပါတယ်။ OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) 49 နိုင်ငံထဲမှာတော့ 44 ခုမြောက် နိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်သက်ရဲ့ ၄၀% နှုန်းကိုသာ ပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ နယ်သာလန်နဲ့ အီတလီနိုင်ငံတို့ရဲ့ ပင်စင်လစာထက် တစ်၀က် အောက်မှာပဲရှိပါတယ်။
ဒါဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပြီးသား နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့ အနိမ့်ဆုံးအဆင့်မှာရှိပါတယ်။
၂။ မော်တော်ယာဥ်အခွန် မြင့်လွန်းခြင်း၊
လူငယ်တွေဟာ ကားမစီးကြတာက ရထားကပိုပြီးအဆင်ပြေတာကြောင့်များလား…? မဟုတ်ပါဘူး။
မော်တော်ယာဥ်အခွန်ဟာ အရမ်းကိုများလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂျာမဏီမှာ ၄.၂ ဆ၊ ပြင်သစ်မှာ ၁၆.၃ ဆနဲ့ အမေရိကမှာ ၅၀.၁ ဆ တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေကြောင့် ကားကိုမစီးဘဲ ရထားကိုအများဆုံး အသုံးပြုကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၃။ မသိကျွမ်းသူကို ကူညီပေးခြင်း၊
ဒီအချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးတဲ့ရလဒ်အရ နိုင်ငံပေါင်း ၁၄၄ မှာဂျပန်နိုင်ငံက ၁၄၂ ခုမြောက်အဆင့်မှာ ရှိနေပါတယ်။
ဂျပန်လူမျိုးတစ်ယောက် မြန်မာကိုလာတဲ့အတွေ့ အကြုံအရ မြန်မာလူမျိုးအများစုဟာ ကြင်နာတတ်ကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။ တကယ်ကတော့ မြန်မာလူမျိုးတွေက ပိုကြင်နာတတ်ကြလို့မဟုတ်ဘဲ၊ ဂျပန်နိုင်ငံဟာ နွေးထွေးမှုမှာအားနည်းလာလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရာကလည်း တစ်ခုသောဆိုးရွာတဲ့ ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ်။
၄။ မိမိကိုယ်ကို သတ်သေမှုအများဆုံးနိုင်ငံ၊
ဂျပန်လူမျိုးတွေရဲ့ မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်မှုမှာ အနည်းငယ်သံသယဖြစ်စရာကရှိပါတယ်။ မိမိဆန္ဒနဲ့ အဆုံးစီရင်ကြသူရှိသလို၊ မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်ချင်လောက်တဲ့အထိ တွန်းအားပေးမှုတွေက ဖြစ်လာ လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကမ္ဘာ့စံနှုန်းအတိုင်းအတာအရ သေဆုံးသူတွေရဲ့တစ်၀က်က မိမိကိုယ်ကိုအဆုံးစီရင်သူတွေပဲ ဖြစ်တယ်လို့ ရရှိထားပါတယ်။ ဒီအတိုင်းသာဆို တစ်နှစ်မှာ ကမ္ဘာတစ်၀ှမ်းလုံးရှိ လူပေါင်းတစ်သိန်းကျော်က မိမိကိုယ်ကို အဆုံးစီရင်နေကြပါတယ်။
၅။ Scholarships အလွန်နည်းပါးခြင်း၊
ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောနိုင်ငံအများစုက သေချာပေါက် Scholarships ပေးတဲ့အတွက်၊ ထူးချွန်တဲ့ ကျောင်းသားများက ကျောင်းလခပေးရန်မလိုဘဲ စာသင်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံကတော့ ပညာသင်ထောင့်ပံ့စရိတ်ဟာ မလုံလောက်တဲ့အတွက် မိမိရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ငွေ ဒါမှမဟုတ် ဘဏ် တွေကနေ ချေးငွေယူပြီး ကျောင်းတက်ကြရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
၆။ လူမှုဖူလုံရေးအသုံးစရိတ်များသည် လစာတိုးမြင့်ခြင်းထက်ပိုမိုများပြားခြင်း၊
လစာကသိပ်ပြီး မပြောင်းလဲသေးတဲ့အတွင်းမှာပဲ လူမှုအာမခံကြေးများကတော့ တရိပ်ရိပ်တက်လာပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ယခုနှစ်ချမှတ်ထားတဲ့ စားသုံးမှုအခွန်မြင့်တက်ခြင်းမှာ မည်သူမဆို တဖြည်းဖြည်း ကျပ်တည်းတဲ့ အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာပါတယ်။
၇။ Single Mother တွေကပိုပြီး ပင်ပန်းဆင်းရဲ၊
ကွာရှင်းပြတ်စဲပြီးတဲ့နောက် ကလေးကိုတစ်ယောက်တည်း ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ရတဲ့ ဂျပန်အမျိုးသမီးတွေက ပိုပြီးခက်ခဲပါတယ်။ ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ ၅၄.၆ ရာခိုင်နှုန်းသော Single Mother တွေက ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ တွေ့ကြုံနေရပါတယ်။
၈။ ငွေစုခြင်းမရှိသောအိမ်ထောင်စုနှုန်း မြင့်တက်၊
ပင်စင်လစာနည်းသောဂျပန်နိုင်ငံမှာ ငွေကိုမစုဆောင်းထားပါက အိုမင်းတဲ့အခါအသက်ရှင်နေထိုင်ဖို့ ခက်ခဲမှာအသေအချာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ အိမ်ထောင်အများစုဟာ ငွေမစုထားကြပါဘူး။
ဒါဆို ဘယ်လိုများ အသက်ရှင်သွားကြမလဲ…..?
ဒါက တော်တော်လေးကို ပြင်းထန်တဲ့အချက်အလက်တွေဖြစ်ပေမဲ့၊ ယခုဂျပန်ရဲ့ အခြေအနေတွေကို လိုက်နာကြောင်းပြသတဲ့ အချက်အလက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
အနာဂတ်မှာကော ဂျပန်ရဲ့ အရှိန်အဟုန်ကို ပြန်ယူနိုင်မယ့်အချိန်က ရောက်လာပါ့မလား….?
မရောက်လာခဲ့ရင်တော့ ဘယ်လိုအခြေအနေကို ရောက်ရှိသွားမလဲ….?